အဆိုပါ Lego Ninjago ရုပ်ရှင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ၎င်း၏ဖြန့်ချိ, startယနေ့ USA တွင် ing ။ အဖြစ်အပျက်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်, Brick Fanatics အချို့ရှိ 10232 နန်းတော်ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်အတူပျော်စရာ
အချိန်ကျပြီ! အများကြီးပြီးနောက် ဖောင်းပွက The Lego Ninjago ရုပ်ရှင်ကိုယူအက်စ်အေတွင်ယနေ့ဖြန့်ချိသည်။ ကျင်းပရန်, Brick Fanatics အချို့သောပျော်စရာခဲ့ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ပေးထားတယျ Lego ရုပ်ရှင် Premiere ။
အစုံပိုင်သူများ 10232 နန်းတော်ရုပ်ရှင်ရုံ အဆောက်အ ဦး ၏တစ်ဖက်တွင်ရုပ်ရှင်ပိုစတာသုံးခုကိုပြသထားသည်ကိုသင်သိရလိမ့်မည်။ ၄ င်းတို့ကိုသီးခြား standard windows သုံးခုပေါ်တွင် decals များထည့်ခြင်းဖြင့်ဖန်တီးသည်။ ဤအစီအစဉ်၏လှပမှုသည်ထို ၀ င်းဒိုးဒီဇိုင်းများကိုအလွယ်တကူလဲလှယ်နိုင်ပြီးအသစ်ဖြန့်ချိမှုများကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့် Warner Bros မှနောက်ဆုံးထွက်တရားဝင်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ပြုပြင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည် Lego Group မှ။
ဒါဟာဒီမှာန်းကျင်အစဉ်အလာ၏နည်းနည်းဖြစ်လာနေသည် Brick Fanatics အတွင်း၌အသစ်ဖြန့်ချိမှုအတွက်နန်းတော်ရုပ်ရှင်ရုံထုတ်ရန် Lego ရုပ်ရှင်စကွဝuniverseာ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာ ၀ တ်စုံတွေဝတ်ထားတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ Ninja ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကိုတင်ဆက်ထားတယ်။ Garmadon နဲ့ Master Wu တို့ဟာသတ်သတ်မှတ်မှတ် p ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။art နန်းတော်ရုပ်ရှင်ရုံရဲ့ပုံစံမျိုး၏။
10232 နန်းတော်ရုပ်ရှင်ရုံ နောက်တစ်ခု Lego modular အဆောက်အ ဦး သည်အငြိမ်းစားယူရန်စီစဉ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင် Premiere Shots များဖန်တီးနိုင်အောင်၎င်းကိုကောက်ယူသင့်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမော်ဒယ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော် st တစ်ခုသောအခါ ပို၍ ပင်ကြီးမားသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်artပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း။ အနီရောင်ကော်ဇောနှင့်ဓာတ်ပုံသမားတွင်းထဲသို့ထည့်ခြင်းက၎င်းကို Premiere night ၌အပြည့်အဝအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည် ကျနော်တို့ LEGO အဘို့ကိုပြု၏ Batman ရုပ်ရှင်။
10232 နန်းတော်ရုပ်ရှင်ရုံကနေရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
အဆိုပါ Lego Ninjago ရုပ်ရှင်အသွင်အပြင်များ:
70617 Ultimate Ultimate လက်နက်၏ဘုရားကျောင်း - ချိတ်ဆက်မှုငါးခု
အဆိုပါ Lego Ninjago ရုပ်ရှင်အစီအစဉ်များသုံးသပ်ချက်များ:
← LEGO House ယနေ့ဒိန်းမတ်ဘီလ်လန်တွင်ကြည့်ပါ
အဆိုပါ LEGO NINJAGO ရုပ်ရှင် outtakes →